१ सय २ बर्ष अगाडीको दुर्लभ तथ्य र तस्वीर : कोरोना जस्तै भाइरसले २० करोड मानिसले ज्यान गुमाए ! – Koshidaily
१ सय २ बर्ष अगाडीको दुर्लभ तथ्य र तस्वीर : कोरोना जस्तै भाइरसले २० करोड मानिसले ज्यान गुमाए !
access_alarms Koshi daily २९ फाल्गुन २०७६, बिहीबार १६:२२	chat_bubble_outline 0	Comments
आंगाना चक्रवर्ती, बीर बहादुर वली । अहिले विश्वभर कोरोनाको त्रास फैलिएको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ले नोबेल कोरोना भाइरस वा कोभिड–१९ लाई विश्वव्यापी महा मारी घोषणा गरेको छ । ४ हजार भन्दा बढीको मृत्यु र १ लाख १८ हजार भन्दा बढी कोरोना संक्रमितहरु ११४ देशहरुमा देखिएका छन् । कोरोना सन् १९१८ को स्पेनिश इन्फ्लूएन्जा महा मारीको लगत्तै सय वर्ष पछि देखा पर्‍यो । स्पेनिश इन्फ्लूएन्जाले विश्वव्यापी ५ देखि १० करोड जति मानिसको ज्यान गएको अनुमान गरिएको थियो ।
भारतमा मात्र १ देखि २ करोड मानिसहरुको ज्यान गएको बताइएको थियो । स्पेनिश इन्फ्लूएन्जा पनि मान्छेहरुको स्पर्शबाट एक अर्कामा सर्ने गरेको थियो । त्यसपछि नै मान्छेहरुले माक्स लगाउन थालेका हुन् । यो पनि स्वाइन फ्ल्यु, वर्ड फ्ल्यु लगायत रुपमा देखा पर्यो । एउटा रिपोर्टका अनुसार ‘बम्बई इन्फ्लुएन्जा’ वा ‘बम्बई फीवर’ भनेर चिनिने फ्लू मे १९१८ मा बम्बई बन्दरगाहबाट भारत आइपुगेको थियो । रिपोर्टमा जेए शहरको स्वास्थ्य अधिकारी टर्नर, जसले महा मारी ‘रातमा चोर जस्तै बम्बई आयो’ भनेका थिए ।
बम्बई डाक सेवाका सात पुलिस कन्सटेबल मध्ये एक पहिलो ‘गैर–मलेरिया ज्वरो’ आएपछि पुलिसलाई अस्पतालमा भर्ना भएको थियो । चाँडै, एउटा जहाज कम्पनी, बम्बई पोर्ट ट्रस्ट, हङकङ र शंघाई बैंक, टेलिग्राफ अफिस, मिट र राचेन ससून मिल्सका कर्मचारी पनि बिरामी भए । संक्रमणको पहिलो छाल, जुन महा मारीको रूपमा शुरू भयो । अनुमान गरिएको थियो कि वृद्ध र बालबालिकाहरूलाई मात्र असर गरेको देखिन्छ, तर अनुसन्धानमा थप डरलाग्दो खुलासा भयो ।
अनुसन्धानकर्ता डेभिड आर्नोल्डले भारतमा ‘द डेथ एण्ड द मोडर्न एम्पायर–द–१९१८–१९ इन्फ्लुएन्जा म हामारी’ शीर्षकको आफ्नो लेखमा २० देखि ४० बर्ष उमेरका वयस्कहरूले धेरै ज्यान गुमाएको बताएका थिए । एक दिन मा, ६ अक्टूबर १९१८ मा बम्बई शहर मा इन्फ्लूएन्जाबाट ७६८ जनाको मृत्यु भएको थियो । उनले लेखमा १८९० देखि १९०० को दशकमा प्लेग महामारीको उचाई भन्दा बढीको मृत्यु भएको थियो । पछि यो रोग पञ्जाब र संयुक्त प्रान्त (अहिले उत्तर प्रदेश) मा फैलियो । यस रोगका विनाशकारी असरहरूको वर्णन गर्दै यस पटकका कतिपय रिपोर्टहरूले गंगा नदीमा ला शलाई बगाएको मार्गको पनि उल्लेख गरेका थिए ।
यस रोगले भारतमा १ करोड देखि २ करोड ५० लाख व्यक्तिको ज्यान लिएको कुरा बताइएको थियो । विश्वव्यापी मृत्यु कुल जनसंख्याको करीव ५ प्रतिशत रहेको थियो । १९११ जनगणनामा रेकर्ड अनुसार विश्वभर कम्तीका १० करोड भन्दा धेरै मानिसहरुले ज्यान गुमाएका थिए । सन १९१८ को स्पेनिश फ्लूले भारतलाई बद्लेको कुरा कवि सूर्यकांत त्रिपाठीले ’स्पेनिश फ्लू, भारत को बदल दिया’मा लेखेका थिए । उनले लेखेका थिए, ‘यो मेरो जीवनको अनौठो समय थियो । मेरो परिवार आँखा झिम्क्याएर हरायो । हाम्रा सबै साझेदारहरू र मजदुरहरू म रे, चारजना जसले मेरो भान्जाका लागि काम गरे, र उनीहरूका लागि जसले मसँग काम गरे दुई जना पनि गए ।’
महात्मा गान्धी, जो त्यस समयमा एक तीव्र पेच रोगबाट मुक्त भए, उनले महामारीको लागि सोध्दै उनले ’गंगाभान’ भनेर सम्बोधन गरेका थिए । उक्त चिठीमा यस्तो लेखिएको थियो, ‘हाम्रा पुर्खाहरूले विगतमा यस्तै कठिन शरीर निर्माण गर्न सक्थे । तर आज हामी दयनीय दुर्बलताको स्थितिमा कमजोर भएका छौं र हावाबाट सर्ने हानिकारक कीटाणुहरूद्वारा सजिलैसँग संक्रमित भएका छौ । त्यहाँ एक मात्र प्रभावकारी तरीका छ जसबाट हामी उनीहरूबाट आफूलाई वर्तमान स्वास्थ्य स्थितिमा पनि जोगाउन सक्छौं।’